Global Voices teny Malagasy » Sina: Fanandramana Ny “Fanapahana Vonjimaika” ny World Wide Web? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Avrily 2012 3:34 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Candy
Sokajy: Shina, Mediam-bahoaka, Fitantanana-aterineto, GV Mpisolovava
Araka ny tatitra tany toerana  [zh], izany olana tsy nahafahana nifandray tamin'ny ivelany izany dia nanomboka tamin'ny 10:40 maraina hatramin'ny 12:20 antoandro ka tsy afaka niditra tamin'ireo vohikala malaza tahaka ny MSN, Gmail ary App Store ireo mpampiasa aterineto nandritra izany fotoana izany. Tetsy ankilany, ny mpampiasa aterineto avy any ivelany koa tsy afaka niditra tamin'ireo vohikala Sinoa. Tamin'ny voalohany aloha dia nihevitra ny mpampiasa aterineto fa avy amin'ny foto-drafitrasam-pifandraisana sinoa ny olana, noho ireo horohorontany farany teo tany Azia Atsimo. Nefa ireo orinasam-pifandraisana China Telecom  sy China Unicom  dia samy nandà fa tsy olana eo amin'ny fotodrafitrasa no mahatonga ny tambajotra tsy handeha. Noho izany dia nilaza ireo manampahaizana teny an-toerana fa olana eo amin'ny rindrambaiko izany.
Ao amin'ny Sina Weibo, misy adihevitra maromaro momba izany vaovao izany ary maro no manaiky ilay resaka fanandramana “fanapahana vonjimaika”  [zh]:
(Sary famantarana avy amin'ny Setyoufreenews .)
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/04/25/32224/
 tatitra tany toerana: http://tech.sina.com.cn/t/2012-04-13/08056952652.shtml
 manaiky ilay resaka fanandramana “fanapahana vonjimaika”: http://weibo.com/1642634100/yeno5hlIz